Hadoop Maamulka - Hage Dhameystiran - Iskuulka ITS Tech
Hadoop Maamulka - Hage Dhammaan
Tilmaamaha dhammaystiran ee maamulka Hadoop
Faa'iidooyinka Tababarrada Hadoop
Hadoop Hannaanka Siyaasadeed
Hadoop ma aheyn sanadihii 5, Hadoop ayaa kali ku shaqeyn doonta qaybta weyn ee xogta aduunka. Tiknoolajiyada cusubi way kulul tahay, shirkaduhuna waxay aad ugu baahan yihiin musharaxyo haysta shahaadada Hadoop.
Nidaamka barnaamijka Java ee Hadoop ayaa si fudud u furan oo loogu talagalay diyaarinta xogta weyn ee cajiibka ah ee laga helo gudaha gudaha xaalada PC. Sida Hadoop u isticmaasho najaarayaasha ugu qalafsan ee diyaarinaya xogta, shirkadaha iyo ururadu waxay jecelyihiin oo ku tiirsan yihiin qaabka qiimaha kharashka. Faa'iidooyinka kala duwan ee nidaamka barnaamijka ayaa ka kooban siman isku diyaarsanaanta noocyo kala duwan oo xog ah oo si ballaaran loo qaybiyay, miisaaman, hufnaanta goobaha xogta, taageerida rukummada hubka ee waaweyn, iyo maareynta guuldarada si toos ah.
2 qaybaha ugu waaweyn ee hannaanka maamulka Hadoop waxaa ku jira MapReduce iyo HDFS. Hadoop qaybta qaybta xogta horumarka ah waxay qaybisaa xogta yaryar ama bustooyinka iyo xirmooyinka xogtan ayaa la dhigayaa meelo gaar ah iyo kuwo kala duwan, xarumaha ku dhex yaal kooxaha dhexdooda. Hadoop waa waqtigii ugu fiicnaa ee waqtigeeda ku habboon iyo waqtigeeda waqtigeeda si loo dhigo xogta weyn ama yar ee ku jirta xusuusta wareegga waa mid aad u yar. Hadoop ayaa sidoo kale ku celisa dhammaan xogta ku saabsan makiinado kala duwan oo ku yaala gudaha kooxda, kumbuyuutarkana waxa ay si toos ah ugu tiirsan yihiin kantaroolka. Maadaama ay isku duubnaadaan xogaha kala duwan, isla mar ahaantaana waxaa si fudud loo diyaarin karaa waqti isku mid ah xogta la qabadsiiyay.
Shahaadada Hadoop waxay muujineysaa in aad ka faa'iideysan karto habka maaraynta xogta si kor loogu qaado wax soo saarka ururka. Shirkadaha maanta ayaa si joogto ah u raadinaya heystayaasha haysta shahaadooyinka Hadoop, taas oo muujinaysa kalsoonida iyo kartida aad u leedahay inaad ku qaadato waajibaadyada shaqada ee la xidhiidha macaamiisha Big Data.
Waa maxay sababta Hadoop Shahaadadaada Xirfaddaada?
Hadoop ayaa ah habka cusub ee loo xakameynayo xogta weyn, iyo shaqaalaha Hadoop ee damaanad qaadka ah ayaa looga baahan yahay caymiska, daryeelka caafimaadka, maaliyadda, tafaariiqda, maareynta iyo qaybo ganacsi oo kala duwan iyo xaglaha. Fulinta Hadoop ayaa si aad ah waxtar u leh, xirfadlayaasha IT-ga ee badankood waxay bedeleen jidkooda xirfadeed si ay u qabsadaan tiknoolajiyada cusub. Hadoop ayaa hadda ka faa'iideysanaya munaasabadda Mainframe, Java, iyo bakhaarada xogta iyo mustaqbalka soo socda, qaabka cusub wuxuu noqon doonaa go'aanka ugu muhiimsan ee falanqaynta xogta iyo diyaarinta.
Tababbarka iyo shahaadooyinka Hadoop waxay leeyihiin faa'iidooyin kala duwan ee labada xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah iyo kuwa cusub.
Shahaadada waxay ku jirtaa baahida, shirkadaha ayaa si firfircoon u raadinaya musharrixiinta haysta shahaadooyinka Hadoop iyo awoodda.
Shahaadada Hadoop waxay kugu wareejineysaa labadiinaba mushaharka iyo kor u qaadista, iyo inaad kasbato wax ka badan kuwa kale ka dib markaad si fiican u qaaddid kooraska.
Kuwa cusub ee qaabka Hadoop iyo xaaladdu waxay u gudbin karaan shahaadada waxayna helayaan waxa ay qaadato iyo macluumaadka ku saabsan korsashada qaab dhismeedka iyo hirgelinteeda.
Marka tababarku yahay waqti dhab ah oo ku dhiirigeliya inaad adigu xakamayso xaaladaha dhabta ah ee dunida iyo xogta, shahaadada waxay muujineysaa in aad haysatid gacmaha hoos u dhac ku yimi aagagga daalacan.
Waxay muujisaa inaad ka warqabto dhammaan dhinacyada tiknoolajiyada ugu dambeeyay waxayna ka caawin karaan inay tababaraan dadka kale sidoo kale marka ay shaqaaleeyaan shirkad.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si loogu diyaar garoobo Hadoop Shahaadada
Kooraska shahaadada Hadoop waxaa ka mid ah saacadaha 30 ee internetka iyo tababarka lagu nool yahay ee la abaabulo oo ay bixiyaan tababarayaasha, kuwa la ansixiyay oo la xaqiijiyey Macallimiinta. Waxaa laga yaabaa inaad heshid qaar ka mid ah iswaafajinta waqtiyada aad rabto inaad barato koorsada. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad qaadato shaqooyinka, iyo kiisaska nolosha dhabta ah waxay xoogga saartaa caawimaad aad ku heleyso gacan-qabasho ku aaddan dhacdooyinka dhabta ah ee xirfadaha adduunka. Waxaa jira dhibaatooyin aad u yar oo loo baahan yahay in la baro koorsada, iyada oo hogaamiyaha kumbuyuutarka ee ugu horreeya ee internetka kuugu deeqi doona 24 * 7 oo laga heli karo khadka tooska ah ee tooska uga yimaada takhaatiirta. Waxa kale oo aad ka heli kartaa wada-hadalada meesha aad ka heli kartid hage tilmaamaya wada-xaajoodka oo la wadaagaan fikradahaaga inta aad ka helayso aragtida dadka kale. Marka laga reebo faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka barashada koorsada, waxaad sidoo kale heleysaa habka maaraynta barashada, oo si joogta ah u cusbooneysiiya aragtidaada iyo kartidaada iyo sababaha aad u joogteynayso casriyeynta ugu dambaysa iyo isbedelada la xiriira Hadoop.
Maadooyinka muhiimka ah iyo mawduucyada lagu hubinayo koorsada shahaadada Hadoop waxaa ka mid ah:
Hadoop iyo naqshadeynta xogta Big
Advanced HBase iyo Hive
Hadoop iyo Andzie ayaa sii fidaya
Hagaajinta iyo wareegga xogta ee isticmaalka Apache Spark
Mashruuca internetka ee internetka wuxuu abuuri doonaa mishiinka farsamada gudaha gudaha qaab-dhismeedka PC-da wuxuuna kuu soo bandhigi doonaa helitaanka degaanka. LMS ama Nidaamka Maareynta Waxbarashada waxay haysan doonaan dhammaan wargelinta iyo rakibida macluumaadka la xidhiidha oo ay tahay inaad la kulanto koorsada. Daraasadaha kiisku waxay kuugu imaanayaan dhamaadka koorsada waxaadna isticmaali doontaa qaababka muraayadaha dhismaha sida HIVE, PIG, MapReduce iyo HBase si ay u fuliyaan falanqeyn ku saabsan Xogta Weyn ee waqtiga dhabta ah. Daraasadan kiiskan waa kuwo ganacsi oo gaar ah oo ku lug leh aagga ganacsiga oo ay ka mid yihiin warbaahinta, duulista, tafaariiqda, maaliyadda, iyo kuwa kale.
Maaddaama dhammaan kulamada tababarka iyo tababbarka ee la dhigo gudaha LMS, ma dareemi doontid inaad lumiso mid ka mid ah fasalada oo aad la kulmi karto wakhti kasta oo aad rabto. Marka laga reebo LMS, kalfadhiyada noloshu waxay sidoo kale mar labaad u adeegsadaan fasalada kala duwan, waxaadna baran kartaa maadooyinka aad ka maqnayd cinwaanka soo socda ama casharka fasalka.
Waa maxay shuruudaha Shahaadada Hadoop?
Inkastoo aysan jirin wax shuruud ah oo lagu xulanayo shahaadada Hadoop, waxay ku fiican tahay fursadda aad ka haysato macluumaadka la xiriira SL iyo Core Java. Waxaad ku baran kartaa jaantusyada Java ama waxay cadayan kartaa adoo ku biiraya koorso kale.
Waxaad u baahan tahay PC oo leh ugu yaraan 4 GB RAM, oo ay weheliso processor i3 (ama aad u sareeya) si aad ugu biirto koorsada interneetka iyo inaad si waxtar leh u barto. Haddii ay dhacdo inaad ku guuldareysatid inaad ka soo baxdid mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah, waxaa sidoo kale lagu siin karaa fursad fog oo aad ku hesho kooxda Hadoop oo ay kuugu diyaarinayso aasaaska shahaadadaada.
Maxay tahay sababta Tababarka Hadoop loo baahan yahay?
Kuwa ugu wanaagsan ee shirkadaha adduunka, oo ay ku jiraan MNCs ee cabbirka weyn waxay u baahan yihiin IT xirfadlayaal ah oo awood u leh inay maamusho tiro badan oo xog ah oo ay tahay in ay isticmaalaan ama dukaameystaan. Cabbirka xogta wuxuu noqon karaa mid aad u kordho oo soo saaro xogta saxda ah iyo saxda ah ee ka baxsan waxay noqon kartaa hawl culus oo dhib badan. Shakhsiyaadka ku habboon shahaadada Hadoop si wax ku ool ah ayaa u gaari kara hadafka si fudud. Maaddaama qaabka Hadoop uu helayo fursad uu ku noqon karo mid sii kordheysa oo caalami ah toddobaad kasta iyo bil kasta, shahaadeynta aaggan ayaa kuu gudbin kara guulo badan oo ku aaddan takhasuska.
Xarumaha tababarka Hadoop ee ku saabsan wax wada qabsiga dhamaanba macluumaadka weyn ee diyaarinta xogta iyo ujeeddadeedu in ay kuugu noqoto dhakhtar sare ee macluumaadka. Tababarka gacmuhu wuxuu la xiriiraa nidaamka la aqbalay iyo jawiga MapReduce, HDFS, HBase, Pig, Hive, Sqoop, Oozie iyo qaababka kale ee maareynta xogta. Tababarka Hadoop wuxuu kaa hor istaagaa awoodda lagama maarmaanka ah iyo barashada meelaha sida:
Qaababka kala duwan ee xogta
Fahmidda naqshadda Hadoop 2x
Dhismaha kooxda Hadoop iyo soo saarista mashaariicda yareynta khariidada khariidada
Laga bilaabo xogta falanqaynta xogta iyada oo la adeegsanayo rugta, doofaarka, iyo YARN ee dhismayaasha iyo moodooyinka kala duwan
Isdhexgalka Khariidadda Khafiifinta iyo Hirgelinta H Base
Qorshaynta shaqooyinka loo marayo Andzie
Ka shaqeynta fahamka RDD ee Spark iyo habka bayoolajiga oo dhan
Qaadashada tallaabo ku saabsan nolosha dhabta ah waxay ku fidisaa oo ay baareysaa falanqaynta la xidhiidha xogta weyn.
Daraasadaha danbe waxay sidoo kale muujinayaan in muhimadda Hadoop ee qaab-dhismeedyada waaweyn ee maareynta xogtu ay sii kordheyso mustaqbalka dhow. Wararka ayaa sheegaya in suuqa Hadoop ay ku dhawyihiin $ 99.31 kahor sanadka 2022, waxaana uu horumarin doonaa heer ku dhow agagaarka 42.1 mustaqbalka dhow.
Barashada xogta weyn iyo Hadoop waxay waxtar u tahay dadka cusub iyo sidoo kale xirfadlayaasha IT-ga ee tababaran. Engineers, Architects, imtixaan, BI, DDW, iyo xirfadlayaasha ETL dhamaantood waxay baran karaan in ay balaariyaan kala duwanaanshahooda oo ay u isticmaalaan iyaga oo u adeegsanaya waxqabadka weyn ee xogta.
Macalinka haya'dda ee Hadoop ee internetka ayaa fiirin doona hirgalintaada ugu dambeysa, iyo fursada aad u gudbinayso shahaadada si wax ku ool ah, waxaa lagu siin doonaa shahaadada Big Data iyo Hadoop. Shahaadadu waxay qadarinaysaa qirashada iyo aqbalaadda weyn. Shirkado badan oo hogaaminaya iyo MNCs ayaa ah wada-hawlgalayaasha tababarka ee aasaasiga ah ee tababarka internetka iyo tababbarka, kuwaasi waxay ku daraan Wipro, Nokia, Cisco, Ford, IBM iyo wixii la mid ah. Markaa kadib waxaad xaqiijin kartaa in shahaadadaadu tahay mid asal ah waxaana lagugu siin doonaa xirfad aad u sareeya iyo mushahar.
Shahaadada Hadoop waxay kaa dhigi doontaa inaad u qalantid mushaarka $ 98 k ama si tartiib ah iyo khibrad leh, mushahar kordhin dheeraad ah. Waxaa jira wax ka badan 4.4 million macaamiisha xogta waaweyn ee hadda, iyo albaabada furan waxay kordhayaan heerka xNUMX%. Nashqadeeyayaasha Hadoop ayaa ah kuwa ugu fiican oo intooda badan la raadinayo kadib markii xogta la dhiso maanta, waxaad ku biiri kartaa cagsigoyinka hadda si ay u baaraan skylines skilines.
Shahaadada ITIL - Hagid dhammaystiran
Xakamaynta wareysiga Hadoop - Wareysigaaga - maxaad u leedahay inaad ogaato oo sameyso?
10 Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay R, Python, iyo Hadoop